ပြည်သူ လူထု ၏ ကောင်းမြတ်သည့် အကျင့် စရိုက်လက္ခဏာ သည် အာဏာပိုင်များ ၏ စရိုက် လက္ခဏာ နှင့် ဆက်စပ်နေ
ဇှနျ ၁၀, ၂၀၂၁ - ၁၁:၅၈ ညနေ
အေမာမ် အလီ (အ.စ) မှ ရီဝါယသ် တော် တစ်ခု တွင် ပြည်သူ လူထု ၏ ကောင်းမြတ်သည့် အကျင့် စရိုက်လက္ခဏာ သည် အာဏာပိုင်များ ၏ စရိုက် လက္ခဏာ နှင့် ဆက်စပ်နေ ဆိုသည့် ဘက်သို့ ညွှန် ပြ၍ မိန့်တော် မူထားပါတယ်။
မာန ထောင်လွှားခြင်း နှင့် တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန် ခြင်း ၏ ရလာဒ်
ဇှနျ ၁၀, ၂၀၂၁ - ၁၁:၅၇ ညနေ
အေမာမ် အလီ (အ.စ) မှ ရီဝါယသ် တော် တစ်ခု တွင် မာန ထောင်လွှားခြင်း နှင့် တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန် ခြင်း ၏ ရလာဒ် ဘက်သို့ ညွှန် ပြ ၍ မိန့်တော် မူထားပါတယ်။
နမာဇ် နှင့် ပတ်သက်ပြီး အရေးကြီး ဟဒီးစ်တော် တစ်ပါး
ဇှနျ ၈, ၂၀၂၁ - ၇:၃၈ ညနေ
အေမာမ်ဂျအ်ဖရ် ဆွာဒစ် (အ.စ) မှ ရီဝါယသ် တော် တစ်ခု တွင် နမာဇ် နှင့် ပတ်သက်ပြီး အရေးကြီး ဟဒီးစ်တော် တစ်ပါး ဘက်သို့ ညွှန် ပြ၍ မိန့်တော် မူထားပါတယ်။
အကောင်းတကာ အကောင်းဆုံး လူများ နှင့် အဆိုး တကာ အဆိုးဆုံး လူများ
ဇှနျ ၇, ၂၀၂၁ - ၁၀:၅၃ နံနကျ
အေမာမ်ဟစန် (အ.စ) မှ ရီဝါယသ် တော် တစ်ခု တွင် အကောင်းတကာ အကောင်းဆုံး လူများ နှင့် အဆိုး တကာ အဆိုးဆုံး လူများ ဘက်သို့ ညွှန် ပြ၍ မိန့်တော် မူထားပါတယ်။
မဟာတမန် တော်မြတ်ကြီး မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) ၏ စဉ်းစား ဆင်ခြင် ရမည့် ဟဒီးစ်တော်
ဇှနျ ၆, ၂၀၂၁ - ၉:၃၃ ညနေ
မဟာတမန်တော်မြတ်ကြီး မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) မှ ရီဝါယသ် တော် တစ်ခု တွင် သက်တမ်းကုန်ဆုံး သည့် ဘက်သို့ ညွှန် ပြ ၍ ဆုံးမ မိန့်တော် မူထား ပါတယ်။
လိမ္မာပါးနပ် မှု အရှိဆုံး ၊ ပညာအမဲ့ ဆုံး နှင့် ဂုဏ်သိက္ခာ အရှိဆုံး သူများသည် မည်သူများ ဖြစ်ပါသနည်း ?
ဇှနျ ၅, ၂၀၂၁ - ၁၁:၅၈ ညနေ
အေမာမ် ဟစန် ( علیه السّلام ) မှ ရီဝါယသ် တော် တစ်ခု တွင် လိမ္မာပါးနပ် မှု အရှိဆုံး ၊ ပညာအမဲ့ဆုံး နှင့် ဂုဏ်သိက္ခာ အရှိဆုံး သူများသည် မည်သူများ ဖြစ်ကြောင်း ဘက်သို့ ညွှန် ပြ၍ မိန့်တော် မူထားပါတယ်။
မောင်လာ အလီ (အ.စ) ၏ ရှီအာ စစ် ရှီအာ မှန် များ ဆိုင်ရာ ဟဒီးစ်တော် အပါး (၄၀)
ဧပွီ ၉, ၂၀၂၁ - ၁၁:၅၅ ညနေ
မောင်လာ အလီ (အ.စ) ၏ ရှီအာ စစ် ရှီအာ မှန် များ ဆိုင်ရာ ဟဒီးစ်တော် အပါး (၄၀) ကို အဗ်နာ ချစ်ပရိတ်သတ်ကြီး အတွက် တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
အကောင်းတကာ အကောင်းဆုံး အိမ်ထောင်ပြုမှု
မတျ ၇, ၂၀၂၁ - ၁၁:၄၈ ညနေ
မဟာတမန်တော်မြတ်ကြီး မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) မှရီဝါယသ် တော် တစ်ခု တွင် အကောင်းတကာ အကောင်းဆုံး အိမ်ထောင်ပြုမှု (နေကာပြုမှု ) ဘက်သို့ ညွှန် ပြ၍ မိန့်တော် မူထားပါတယ်။
အလ္လာဟ် နှင့် မဟာတမန်တော်မြတ်မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) ၏ အချစ်တော်ဖြစ်စေသည့် လုပ်ရပ် ၃ ခု
မတျ ၅, ၂၀၂၁ - ၇:၅၂ နံနကျ
မဟာတမန်တော်မြတ်ကြီး မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) မှ ရီဝါယသ် တော် တစ်ခု တွင် အလ္လာဟ် နှင့် မဟာတမန်တော်မြတ်မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) ၏ အချစ်တော်ဖြစ်စေသည့် လုပ်ရပ် ၃ ခု ဘက်သို့ ညွှန် ပြ၍ မိန့်တော် မူထားပါတယ်။
ဤမနုဿ လူသားသည် မိုဂျာဟစ်ဒ် ဖြစ်လေ၏ ...
ဖဖေျောဝါရီ ၂၃, ၂၀၂၁ - ၂:၂၂ နံနကျ
အေမာမ်ဂျအ်ဖရ်ဆွာဒစ် (علیه السّلام ) မှ ရီဝါယသ် တော် တစ်ခု တွင် အလ္လာဟ့် လမ်း ရှိ မိုဂျာဟစ်ဒ် ၏ အရည်အချင်း ၊ ဂုဏ် သတ္တိ များ ဘက်သို့ ညွှန် ပြ၍ မိန့်တော် မူထားပါတယ်။
မဟာတမန် တော်မြတ်ကြီး မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) ၏ ဘက်မှ သတင်းကောင်း
ဇနျနဝါရီ ၄, ၂၀၂၁ - ၁၁:၄၇ နံနကျ
မဟာတမန်တော်မြတ်ကြီး မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) မှ ရီဝါယသ် တော် တစ်ခု တွင် မိုအ်မင် တစ်ဦး တစ်ယောက် အား ပျော်ရွှင် အောင် ပြုခြင်း အကျိုး အမြတ် များ ဘက်သို့ ညွှန် ပြ၍ မိန့်တော် မူထားပါတယ်။
အခက်အခဲ ဒုက္ခ အားလုံး၏ အရင်းအ မြစ် ကို အသင် သိပါသလား ?
အောကျတိုဘာ ၁၅, ၂၀၂၀ - ၁၁:၄၄ ညနေ
အေမာမ် မိုဟမ္မဒ် ဘာကဲရ် (علیه السّلام) သည် ရီဝါယသ် တစ်ခု တွင် အခက်အခဲ ဒုက္ခ အားလုံး၏ အရင်းအ မြစ် ကို ညွန်ပြထားပါ တယ်။ အဗ်နာ ပရိတ်သတ်များလေ့လာ နိုင်ရန် တင်ပြ အပ်ပါတယ်။
စကျတငျဘာ ၂၄, ၂၀၂၀ - ၁၁:၅၇ ညနေ
ရှီအာ စစ် ရှီအာမှန်တို့၏ ဂုဏ်ရည်ပြ ဟဒီးစ်တော် အပါး ၄၀ နှင့် သင်ခန်းစာများ
စကျတငျဘာ ၁၀, ၂၀၂၀ - ၁၁:၄၄ ညနေ
ရှီအာ စစ် ရှီအာမှန်တို့၏ ဂုဏ်ရည်ပြ ဟဒီးစ်တော် အပါး ၄၀ နှင့် သင်ခန်းစာများ ကိုအဗ်နာ ချစ်ပရိသတ်များ အတွက် ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
မဂ်ျလစ်စေ ဟိုစိန် (အ.စ) တွင် ထမင်းကျွေးခြင်း နှင့် အသုံးစရိတ် အသုံးပြုခြင်း၏ ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်မှု
စကျတငျဘာ ၈, ၂၀၂၀ - ၁၁:၅၂ ညနေ
မဂ်ျလစ်စေ ဟိုစိန် (အ.စ) တွင် ထမင်းကျွေးခြင်း နှင့် အသုံးစရိတ် အသုံးပြုခြင်း၏ ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်မှု အား အဗ်နာ ချစ်ပရိတ်သတ်ကြီး နှင့် အေမာမ် ဟိုစိန် (အ.စ) ကို အချစ်ထား သူများ အတွက် တင်ပြအပ်ပါတယ်။
အကျင့်စာရိတ္တပျက် ယို ယွင်းမှု ၏ ရလာဒ် များ
ဇူလိုငျ ၁၀, ၂၀၂၀ - ၁၁:၅၂ ညနေ
မအ်စူမီး (علیهم السلام) အနေဖြင့် ကောင်းမြတ်သည့် ကိုယ်ကျင့်တရား ၊ကိုယ်ကျင့်စာရိတ္တ နှင့်ပတ်သက်ပြီး အလွန် ချီးမွမ်း ထားပါတယ်။ လူထုအား ကောင်းမြတ်သည့် စာရိတ္တ နှင့်တန်ဆာ ဆင် ကြဖို့ တိုက်တွန်း မိန့်ကြား ထားပါတယ်။ ပြီးနောက် အကျင့်စာရိတ္တပျက် ယို ယွင်းမှု ၏ အဆိုးတကာအဆိုးဆုံး ရလာဒ် များ နှင့်ပတ်သက်ပြီးလည်း သတိပေးဆုံးမ ထားပါတယ်။ ထိုမှ သာ လူထု အနေဖြင့် ရှောင်ကြဉ် နိုင် ရန် (သို့မဟုတ်) စွန့်လွတ်ဖို့အတွက် ခြေလှမ်း ၊လှမ်းနိုင်ရန် ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုးကျိုး အကျိုး မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ရှီအာ မွတ်စလင်မ် စစ် များ ဆိုင်ရာ ဟဒီးစ်တော် အပါး (၄၀)
ဇှနျ ၂၃, ၂၀၂၀ - ၁၁:၅၅ ညနေ
ရှီအာ မွတ်စလင်မ် စစ် များ ဆိုင်ရာ ဟဒီးစ်တော် အပါး (၄၀) အား အဗ်နာ ချစ်ပရိတ်သတ် ကြီး အတွက် ဟဒီးစ်တော် များ နှင့် အတူ သင်ခန်း စာ များ ကိုပါ တင်ပြ အပ်ပါတယ်။
အေမာမ် ဟစန် မိုဂ်ျသဗါ (အလိုင်ဟေစ်စလာမ်) အကြောင်း အကျဉ်း
မေ ၉, ၂၀၂၀ - ၁၁:၄၇ ညနေ
ရမ်တွာန် လမြတ် ၁၅ ရက်နေ့ တွင် ကျရောက်လာသည့် အေမာမ် ဟစန်မိုဂ်ျသဗါ (အ.စ) ၏ ဝေလာဒသ် မွေးနေ့ မြတ်မင်္ဂလာ နေ့ ဖြစ်ပါသည်။ ကိုယ်တော်မြတ် (ဆွ) နှင့် ကိုယ်တော် ၏ အနွယ်တော်မွန်များ (အ.စ) ကို အချစ်ထားသူတိုင်း ကို ဝမ်းသာပီတိဖြစ်၍ အထူးအထူးမိုမိုဘာရတ်က်ဟုပြောကြားအပ်ပါတယ်။ သခင်ကြီး နှင့်ပတ်သက်သည့် အချို့ အချက်များ ကို အဗ်နာ စာဖတ်ချစ်ပရိတ် သတ်ကြီး ကိုတင်ပြ အပ်ပါသည်။
ရှအ်ဗာန်လမြတ် ၁၅ ရက် အဝင် ညတွင် ကျင့်ရမည့် ကျင့်စဉ်များ မှ အကောင်းဆုံး ကျင့်စဉ် တစ်ခု မှာ နမာဇ်ဇေ ဂျအ်ဖရ်ရေ သွရာရ် (ရ.သွေ့ ) ဖြစ်ပါတယ်။ အင်န်ရှာအလ္လာဟ် ကျင့်ဆောင် နိုင်ကြပါစေ။ မြန်မာပြည်က မွတ်စလင်မ်များ အခေါ် အရ ရှဗ်ဗေဗရာသ် ည ဖြစ်ပါတယ်။
အေမာမ် အလီ နကီ(علیه السلام) ၏ဟဒီးတော် (၁၀) ပါး
မတျ ၅, ၂၀၂၀ - ၉:၁၇ ညနေ
အေမာမ် အလီ နကီ(علیه السلام) ၏ဟဒီးတော် (၁၀)ပါး အား အဗ်နာ ချစ်ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက် တင်ပြအပ် ပါတယ်။
ဖဖေျောဝါရီ ၂၄, ၂၀၂၀ - ၁၁:၅၉ ညနေ
အေမာမ်ဂျအ်ဖရ် ဆွာဒစ် (علیه السّلام) ၏ ထံတော် မှ ရောဂါသည်များ ကို ဆိုဆုံးမထားသည့် ရီဝါယသ် တော် တစ်ပါးလာရှိပါသည်။ ထိုဆိုဆုံးမစကား မှာ တောင်းခံသူများ ကို မိမိတို့၏ လက်ဖြင့် ဆဒ်ကာ ပေး၍ မိမိ၏ ရောဂါ ဝေဒနာ ကို ကုသပါဟု၍ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖဖေျောဝါရီ ၁၁, ၂၀၂၀ - ၁၁:၅၄ ညနေ
ရှီအာမွတ်စလင်မ် တို့၏ပင်းမ ကျမ်းကြီး များ အကြောင်း အနည်းငယ် ဖော်ပြလိုက်ပါတယ် ။
မိုအ်မင်၏ လက္ခဏာ အမှတ်အသား ၅ ခု
အောကျတိုဘာ ၁၉, ၂၀၁၉ - ၉:၅၄ နံနကျ
အေမာမ်ဟစန်အက်္စကရီ (علیه السّلام) မိန့်တော်မူ၏။ «عَلاماتُ المؤمنِ خَمسٌ: صَلَواتُ إحدی و خَمسینَ، و زیارةُ‌ الأربعینَ، و التَّخَتُّم بِالیَمینِ، و تَعفیرُ الجَبینِ، و الجَهْرُ بِبسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم» မိုအ်မင်၏ လက္ခဏာ အမှတ်အသား ၅ ခု ရှိပါသည်။
စလ်ဝသ်ပို့သသူများ အပေါ် ကောင်းကင်တမန်များ ဘက်မှ အစ်သေဂ်ဖါရ် ဖတ်ရွတ်ပေး
အောကျတိုဘာ ၁၉, ၂၀၁၉ - ၈:၀၄ နံနကျ
စလ်ဝသ်ပို့သသူများ အပေါ် ကောင်းကင်တမန်များ ဘက်မှ အစ်သေဂ်ဖါရ် ဖတ်ရွတ်ပေးခြင်းအကြောင်းကို အောက်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
အေမာမ်ဟိုစိန် (အ.စ) ကရ်ဗလာ သို့ သွားရသည့် ရယ်ရွယ်ချက်များမှ ၅ ခု
အောကျတိုဘာ ၇, ၂၀၁၉ - ၅:၀၈ ညနေ
အေမာမ်ဟိုစိန် (အ.စ) ကရ်ဗလာ သို့ သွားရသည့် ရယ်ရွယ်ချက်များမှ ၅ ခု အား အဗ်နာ ချစ်ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက် ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
မောင်လာအလီ (အ.စ) ၏ ရှီအာများ
စကျတငျဘာ ၂၈, ၂၀၁၉ - ၄:၁၉ ညနေ
ဤကျမ်းတော်မြတ်၏ သုံးစွဲထားသည့် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ အသုံးအနှုန်းအရ ခန့်မှန်းရရှိ ရသည့် အချက်မှာ နဘီ (အ.စ) ကို လိုလားနှစ်သက်သူများ ၊ အနှိပ်စက်ခံရသူများ ကို ရှီအာ ဟု သုံးစွဲ ထားကြောင်း တွေ့ ရပါသည်။ ရှီအာ နှင့်ဆန်ကျင့် သူမည်သူပင်ဖြစ်နေပါစေ၊ ၎င်း သည် နဘီ တမန် တော်မြတ် (ဆွ) ၏ရန်သူ ဖြစ်ပါသည်။ထိုနည်းတူစွာ စူရဟ် ဆွာဖါသ် တွင် မိန့်ကြားထားပါသည်။ (انّ من شیعته لابراهیم)ဧကန်မုချ နူးရ် (အ.စ) ၏ ရှီအာများ တွင် ဟဇရသ် အီဗရာဟင်းမ် (အ.စ) သည်လည်း ပါဝင်ပါသည်။ စူရဟ် ဆွာဖါသ် ၊ အာယသ်တော် အမှတ် ၈၃
ကဗျာဆရာများ မှ ဂဒီးရ် နှင့် ပတ်သက်ပြီး ရွတ်ဆို ပြ / ဟဇရတ် အဘာစ် (အ.စ) ရောင်ဇာ တော် ။ ။ photos
ဩဂုတျ ၂၄, ၂၀၁၉ - ၉:၁၃ ညနေ
အဗ်နာ ။ ။ အီရတ် နိုင်ငံ ကရ်ဗလာ မြို့ ရှိ ဟဇရတ် အဘာစ် (အ.စ) ရောင်ဇာ တော် အတွင်း ကဗျာဆရာများ မှ ဂဒီးရ် နှင့် ပတ်သက်ပြီး ရွတ်ဆို ပြနေသည့် ပုံရိပ်အချို့ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဩဂုတျ ၉, ၂၀၁၉ - ၇:၅၃ ညနေ
အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အ.စ) နှင့်ပတ်သက်ပြီး ဟဒီးစ်တော် အချို့ အား စွန်နီ အကျော် အမော် အာလင်မ် ကြီး အလာမာ စူယူသီ ရေးသားသီးကုံးထားသည့် အဲဟ်ယာအိုလ်မိုင်ယသ် ဗေဖွာဆွာအေအဲဟ်လေ့ဘိုက် (သ) (အ.စ) ကျမ်း မှ ကောက်နှုတ် တင်ပြအပ်ပါသည်။